किन धाइरहेछन् माओवादी नेताहरु रोहितको घर ? « Pahilo News
किन धाइरहेछन् माओवादी नेताहरु रोहितको घर ?
प्रकाशित मिति : 17 October, 2016 2:01 pm
१ कार्तिक । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छे (रोहित) लाई भेट्न प्रायः सबै राजनीतिक दलका नेताहरु पुग्छन् । भक्तपुरको कमलविनायकस्थित उनको घरमै गएर भेट्ने र समसामयिक राजनीतिक विषयहरुमा छलफल गर्ने कार्यमा प्रायः वामपन्थी राजनीतिक दलका नेताहरु अग्रसर हुन्छन् । तर, पछिल्लो समय भने रोहितलाई भेट्न युद्ध लडेर आएका माओवादीका नेताहरुको लर्को लाग्न थालेको छ ।
पछिल्लो समय पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेपछि रोहितले दाहालको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिलाई शंकास्पद रुपले हेर्दै आएका छन् । भारतीयहरुको सहयोगमा दाहाल प्रधानमन्त्री भएका कारण राष्ट्रियता कमजोर हुने ठम्याइ कम्युनिष्ट नेता रोहितको रहेको हुँदा उनले आफ्ना अभिव्यक्तिहरु पनि त्यही अनुरुप दिँदै आएका छन् । त्यसो त, नेपाली राजनीतिक वृत्तमा रोहितको परिचय नै भारत विरोधी कम्युनिष्ट नेताका रुपमा रहँदै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालको झुकाव भारतप्रति बढि नै रहेको कुरा उठिरहेकै बेला सोही पार्टीबाट अलग्गिएर वैद्य समूह हुँदै नेकपा (माओवादी) गठन गरेका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले दसैंको पूर्वसन्ध्यामा रोहितलाई भेटेका छन् । भक्तपुरस्थित रोहितको घरमा विप्लव पहिलो पटक पुगेको बताइन्छ । यसअघि रोहित र विप्लवबीच कुनै भेटघाट भएको थिएन । उक्त भेटमा पछिल्लो समय राष्ट्रियताको मुद्दा उठाइरहेको विप्लव र रोहितबीच राष्ट्रियताकै सवालमा कुराकानी भएको बताइन्छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भारतसित गरेको २५ बुँदे सम्झौताले नेपाललाई भुटानको स्तरमा पु¥याएकोबारे ती दुई नेताबीच कुराकानी भएको सूत्रले जनाएको छ । विप्लवले भेट््नुअघि रोहितलाई नेकपा माओवादीका नेता सिपी गजुरेलले पनि भेटेका थिए । रोहित र सिपीबीचमा पनि राष्ट्रियतालगायत अरु विषयहरुमा कुराकानी भएको बताइन्छ । त्यसो त, व्यवस्थापिका–संसदमा २ वटा सिट मात्रै रहेको भए पनि रोहितको नेपाली राजनीतिमा आकर्षण भने कायमै रहेको छ । पाका एवं आफ्ना विचारमा अडिग कम्युनिष्ट नेता भएका कारण रोहितलाई एमाले, माओवादीलगायत अरु कम्युनिष्ट घटकका नेताहरु बारम्बार भेट्न गइरहेका हुन्छन् ।